Eastern Cape Department of Health - UMphathiswa uGomba uthetha nabasebenzi beenkonzo zonyango ezingxamisekileyo
Izinto eziye zaphakanyiswa ngabasebenzi kwintlanganiso ibitanci ibizezi: ukhuseleko lwabasebenzi abazimasa ikhwelo loluntu, ukolulekwa kwengqondo emva kwesithwakumbe, ukunwenwiswa kweenkonzo, ubume obuphathelele kwingqesho yabasebenzi kwiziko lokutsalela umnxeba leenkonzo zonyango ezingxamisekileyo.
UMphathiswa wezeMpilo uye wathetha ngemiba yokhuseleko kwavokotheka kubasebenzi beenkonzo zonyango ezingxamisekileyo. Ukolulekwa kwengqondo kuye kwanikezwa ngabakwaMetropolitan.
Uluhlu labo bonke ooCeba namalungu eziGqeba zamaWadi beluzakwenziwa lufikeleleke kubasebenzi beziko lokutsalela umnxeba beenkonzo zonyango ezingxamisekileyo ukuvundlisa uluntu xa inqwelo yezigulane ithunyelwa kwiingingqi zabo. Abasebenzi beenkonzo zonyango ezingxamisekileyo bafikelele nakumadederhu eevenkile ukuphawula ishwangusha lokuphangwa nalapho izinto zabo zexabiso bezixhuthwa kubo bekhonjwe ngemikhono yekati okanye iimela. Iindawo zezithuthi zikawonke-wonke nazo ziye zatyelelwa ngulo mngcelele.
Le ntlanganiso ibizimaswe zizikhulu kwiinkonzo zabakwantsasana eMzantsi Afrika. Kuye kwacebiswa ukuba iinqwelo zezigulane zihlale kwizikhululo zabakwantsasana ukuze ukuphendula kwazo ikhwelo loluntu kwenzeke ngephanyazo.
Abasebenzi beenkonzo zonyango ezingxamisekileyo baye baqinisekisa uMphathiswa ukuba bazakuqhubeka nomsebenzi wabo ngesiquphe.